Izindaba - U-Elon Musk kaTesla ukhuluma ngomklamo owodwa wokusakaza nangecebo lokulungisa ukushayisana
U-Elon Musk usanda kwabelana ngemininingwane yecebo lokulungisa ukushayisana kukaTesla, futhi inkampani yethule imoto eyenziwe ngabasiki bodwa. Ukuvuselelwa kunikeza uTesla ukuqonda okuthile okuvelayo kwezindlela zokulungiswa nokulungiswa kwezimoto, okuyingxenye yebhizinisi labakhiqizi bezimoto zikagesi, futhi lesi sici singaba sikhulu kakhulu njengoba inkampani ikhula.
Ngokubheka ukuthi izimoto zikaTesla zizokwenziwa kusetshenziswa ama-monolithic castings amakhulu, amalungu omphakathi wezimoto zikagesi abelokhu ebuza ngecebo lenkampani ukulungisa umonakalo odalwe yizingozi ezinjengokushayisana okuncane. Ngemuva kwakho konke, uma imoto kagesi inenani elincane kuphela labasakazi abakhulu, kuzoba inselele enkulu ukufaka ezinye izingxenye zemoto.
Kulokhu, uTesla ubonakala ephakamise isisombululo senoveli esifanele sokubhekana nezinselelo ezingaba khona ezibangelwa ukusakazwa okukodwa. Ngokusho kukaMusk, ujantshi wezimoto ezilwa nokushayisana kwezimoto njengeModeli Y eyenziwe ngeJalimane ungavele “unqamuke bese kufakwa izingxenye eziboshiwe zokulungisa ukushayisana.”
Uma ucabanga ukuthi ukulungiswa kukaTesla namuhla sekuvele kuyinselele futhi kuyabiza, kuzothokozisa ukubona ukuthi ukusetshenziswa kwenkampani kwezingxenye eziboshiwe kuzokwenza ukulungiswa kushibhile noma kubize kakhulu.
Ngaphandle kokubuyekeza isu lokulungisa ukushayisana kukaTesla, i-CEO yakwaTesla iphinde yanikela ngemininingwane enemininingwane ngamaphakethe wamabhethri ezakhiwo zabakhiqizi bezimoto zikagesi, okulindeleke ukuthi zisetshenziswe ezimotweni ezinjenge-S-grids, uCybertruck Imoto entsha eyenziwe eJalimane. Y thayipha. UMusk uthe amaphakethe wesakhiwo sebhethri anganikeza ukuqina okungcono kwe-torsional kanye nomzuzu owedlulele we-inertia, okwenza izimoto zikaTesla ziphephe.
Iphakethe lebhethri lizoba yisakhiwo sokunamathela esinamabhethri angadlulisa amandla okushefa phakathi kwamapaneli wensimbi aphezulu nangaphansi, ngaleyo ndlela aqede izingxenye eziningi zomzimba, ngenkathi enikeza ukuqina okungcono kwe-torsional nezikhathi ezithuthukisiwe ze-pole noma i-inertia. Lokhu kungukuthuthuka okukhulu.
“Iphakethe lebhethri lizoba yisakhiwo esinamathelayo esinamabhethri angadlulisa amandla okushefa phakathi kwamapaneli wensimbi angenhla naphansi, ngaleyo ndlela aqede izingxenye eziningi zomzimba, ngenkathi enikeza ukuqina okungcono kwe-torsional kanye nesikhathi esithuthukisiwe se-inertia. Lokhu kungukuthuthuka okukhulu, ”kusho uMusk.
Kuyathakazelisa ukuthi le mininingwane ichazwe phambilini ngungoti wezokulungiswa kwezimoto uSandy Munro, oveze ukuthi amabhethri ahlelekile angenza iTesla iphephe futhi ingabi sengozini yezingozi ezinjengemililo. Ngokuqondene noMusk, muva nje ubonakale eqinisekisa ukuqonda kukaMunro futhi waveza kuTwitter ukuthi le ngqalabutho “iyabazi ubunjiniyela.”
Isikhulu esiphezulu u-Elon Musk uthe iSpaceX izosakaza ukwethulwa kokwehla kobuhlungu kwale nkanyezi…
UMphathi weTesla u-Elon Musk usanda kukhuluma ukuthi uCybertruck uzobhekana "nokuthuthuka okuncane"